Shelf Corporation uye Aged Kambani Glossary yeMitemo
Masherufu makambani kana kunze kwemashefu makambani makambani akaumbwa pazuva rakapfuura. Sangano rakadaro rinodaidzwa zvakare kuti chembere pasherefu mubatanidzwa. Rumwe ruzivo runobatsira uye rutsigiro rwekutsvagisa nezvenyaya iyi zvinotevera.
Kambani yakwegura kana chembere masherufu mubatanidzwa haina vanogovana uye, kazhinji kunze kwekunge ichida kuiswa kuti ikambani irimire zvakanaka, inogona kunge isina vakuru kana vatungamiriri. Paunenge wawana iwe unogona kufaira runyorwa rwemaofficial nevatungamiriri vane zita rako. Izvo zvakakosha kushandisa kambani yako nenzira yepamutemo, yetsika uye yetsika.
Kunze kweShelf Kambani Yemashoko
Unogona kugamuchira iyo kure nemakambani esherufu ine zita razvino kana isu tinogona kuchinja zita rekambani kune rimwe zita kana uchida. Iwe unogona kuve mutsva mukuru uye vatungamiriri kana iwe unogona kana kusarudza vamwe vatungamiriri nevatungamiriri vanobvuma chinzvimbo. Zvekare, zita rekambani rinogona kuchinjirwa kune rimwe zita riripo rekusarudza kwako.
Yakakwegura Sirifu Kambani
Iwe uchagamuchira zvinyorwa zvekubatanidzwa kune yakwegura masherufu mubatanidzwa kana zvinyorwa zvesangano kune akura masherufu LLC. Izvo zvinyorwa zvichaiswa faira-yakadhonzwa nehurumende, dunhu, nyika kana masimba kwayakatangwa pakutanga. Iwe unokwanisa kugamuchira iyo federal mushandirwi chiziviso nhamba (FEIN), inonziwo Mutero Chitupa kana Mutero ID nhamba. Iwe uchagamuchira iyo rekodhi rekodhi bhuku, hombe bhainda rine zvakakosha zvinyorwa zvemakambani. Iwe unozopihwa zvitupa zvechitoro zvekambani kana zvitupa zvehunhengo kune iyo LLC. Zvitupa zvacho hazvina chinhu uye hazvina kusunungurwa. Iwe zvakare uchagashira maminetsi emisangano mafomu, gore rimwe chete rekunyoresa vamiririri masevhisi, kambani yemubatanidzwa uye rutsigiro rwefoni kupindura mibvunzo yako.
Masherufu makambani haana chero mutero wemitero kana zvisungo zviri pamutemo. Vakagadzirira kuvhura akaundi yebhangi, kutanga kuvaka chikwereti chekambani, uye kutanga bhizinesi.
Nei Uchifanira Kuwana Yako Yega Shelf Kambani?
Kana bhizinesi riine mamwe makore kumashure kwaro, mufananidzo waro unogona kukwidziridzwa. Semuenzaniso, kana iwe wanga uri mubhizimusi rekugadzira kopikopi kwemakore gumi uye ukawana mubatanidzwa wemakore gumi kuitira kuti uenderane nemakore ako mubhizinesi, izvi zvinogona kukurudzira kutendeka kwebhizinesi rako. Vamwe vanokweretesa vanogona kuda kuve vanodisisa kambani yako uye vagadziri uye vatengesi vanonyanya kuda kupa mari yezvemari kana iwe wanga uchinyatso kunge uri mumutsara mumwe chete webhizinesi kwemakore mazhinji. Hatisi kureva kuti chakadai chinhu chinovimbisa mabhenefiti aya, asi ivo vanogona kukupa iwe mupendero mudiki mukuwedzera kune zvimwe zvakakosha zvinhu.
Pamusoro pekuvimbika kwekambani, heano zvimwe zvikonzero zvekutenga yakwegura kambani:
Unogona kutumirwa kwauri zuva rimwe chete raunoisa odha yako.
Iva nenhoroondo pfupi ipapo yekambani yako.
Natsiridza yako mufananidzo uye wedzera yako yemubatanidzwa mufananidzo.
Kurumidza kuteedzera rako bhizinesi rinoedza nekuti kambani yakatoumbwa uye yakagadzirira kukurumidza kuendeswa.
Kurumidza kuwana marezinesi ebhizinesi nekuti kambani iri mumaoko ako nekukurumidza.
Anokurumidza kugona kubhidha pazvibvumirano nekuti kambani inogona kutumirwa nekukasira.
Sezvatinotaura mune zvimwe zvikamu zvechikamu chino, ive shuwa kushandisa kuzara kuzere. Ita kuti avo vaunoitisa navo bhizinesi vazive kuti iwe uchangobva kuwana chinzvimbo chevakuru. Aya mabhenefiti akanyorwa ndee maonero edu chete uye anogona kusashanda kune ako mamiriro.
Chinyorwa cheShelf Makambani
Fonera runyorwa rwakakwana rweinowanikwa masherufu emakambani. Tine runyorwa rwakakwana nekudzvanya iyi link iripamusoro. Ese edu emakambani esherefu akasununguka kubva kune chero chinzvimbo chinozivikanwa. Nekudaro, ivo vakagadzirira kuita bhizinesi kuti iwe ugone kutora mukana wechimwe chinhu changa chiripo kwenguva yakati.
Sirifu Masangano ane Akasimbiswa Chikwereti
Kune mamwe makambani akagara pasherufu ayo atove nekumisikidza zvikwereti. Iwo mabhenefiti ane izvi zvinhu zvikuru. Kutanga, kambani inogona kutokwereta mari iri yoga pasina vimbiso yemunhu kubva kumukuru kana director isati yawanikwa nemuridzi wekupedzisira. Iyo masherufu emakambani ane kiredhiti yakasimbiswa zvinogona kugadzira mimwe mikana mikuru yakadai sekudyara zvivakwa, kutanga bhizinesi, kuwana mota kana kukwereta mari. Izvi zvinogona kubatsira zvakanyanya kune mumwe munhu asina chikwereti chakakwana kana kune uyo anoda kukwereta mari asina kuita chikwereti chako pachako. Sangano rakadai rinowanzo kuve neakaundi bank account zvekare. Izvi zvinoenderana nekuwanika uye nharaunda inokweretesa uye hapana zvivimbiso.
Canadian Shelf Makambani
Pamusoro pemakambani ekuUS uye ekumahombekombe, isu zvakare tine runyorwa rwezvinhu zviripo zvakagadzwa muCanada, mumwe weakanyanya kutengeserana vanobatana neUS. Imwe yemawebhusaiti edu ndeye canadiancorp.com. Isu tinosimbisa makambani mumatunhu ese pamwe neCanada federal makambani. Saka, isu zvakare tine Canadian masherufu makambani ari kutengeswa nguva nenguva.
Izwi iri rakafanana nemamwe mazwi anoshandiswa pano. An yakura shefu kambani ikambani kana LLC yakaumbwa pamberi nhasi yanga yakagara pasherufu yakagadzirira kuwanikwa nemumwe munhu anoda kambani yakaumbwa kare. Kazhinji vanhu vanotenga makambani akadai muNevada, Wyoming kana California pamwe neDelaware.
Sirifu zvitunha zvakafanana nemasherufu emakambani. Iyo ingori nzira yakapfupikiswa yemutsara. Izwi rimwe ratinoonawo rinoti “pasherufu zvitunha nechikwereti chakamisikidzwa, ”izvo zvakafanana nezvakakurukurwa kumwe kunhu pane ino saiti uko chinzvimbo chinotova nechikwereti kana chikwereti chakasimbiswa chePaydex. Paydex chiratidzo chakanyoreswa chemuDun neBradstreet, kambani yemakambani inotaura nezvechikwereti. Dzimwe nguva masangano anozivisa anoda kuti muridzi mutsva agadzire chikwereti kubva pakutanga kana kambani yachinja maoko. Nekudaro, mune iyoyo nguva uve nechimwe chirongwa chinopa rubatsiro mukuvaka mitsva yechikwereti.
Saka, aMasherufu emakambani, akarongeka masherufu emakambani uye kubva pasherefu kambani kuumbwa kunopa mamwe mabhenefiti akakura maererano nekuvimbika, kuwana hukama hutsva hwebhizimusi pamwe nekuchengetedzwa kwemari uye kweaseti.
Nomuzvarirwo, chinyorwa ichi hachifanirwe kuve chishandiso chakazara pachinhu ichi. Izvo ndezve zvakajairwa mareferenzi uye hazvina kuitirwa kufukidza isingaverengeke nhamba ye "hongu buts," uye "iwe wakakanganwa kutaura. Chinokosha ndechekuti, shandisa pfungwa, kutendeseka uye kutonga kwakanaka.
Kuti utore Shelf Kambani, ndapota fonera yedu yemahara nhamba uye taura nemumwe wevanyanzvi vedu uyo ​​anofara kukubatsira. Ndokumbira ufonere Muvhuro kusvika Chishanu pakati pemaawa e7: 00 AM uye 5: 00 PM Pacific Nguva.